Googler, chishandiso chekuve neGoogle pamutsetse wekuraira | Linux Vakapindwa muropa
Googler, chishandiso chekuve neGoogle pamutsetse wekuraira
Kunyangwe iyo graphical nharaunda muGnu / Linux yakavandudza zvakanyanya, kuchine akawanda mafomu ayo anobuda kune yekuraira tambo yesystem yedu yekushandisa Iko kune kusvika webhu mabhurawuza anoshanda pamutsetse wekuraira uye nekugutsikana kukuru kune avo vanoishandisa.
Mune ino kesi tiri kuzokuratidza chishandiso icho chichava chinofadza zvikuru kune vakawanda: kuunza Google kumutsetse wekuraira. Izvi zvinogoneka pasina kushandisa webhu bhurawuza kana chero rakabatanidzwa raibhurari, chingori chishandiso icho inonzi googler.
Googler chishandiso chinotiratidza zvawanikwa neGoogle zvemamwe mazwi kana zvirevo zvatiri kutsvaga. Kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kunyora izwi Googler richiteverwa neshoko rekutsvaga uyezve zvese zvinowana Google zvichabuda. Googler haisi chishandiso chepamutemo cheGoogle, asi chishandiso chemutsetse wekuraira unobatana neGoogle kuratidza mhedzisiro.
Nehurombo, Googler inoshanda chete nekugovera izvo zvakavakirwa paUbuntu kana Debian, mamwe ese ekugovera haana kutsigirwa parizvino, asi mu Github isu tinokwanisa kutsvaga kodhi kuisanganisa uye kuiisa kune kugovera kwatinako. Asi kana isu tiine Ubuntu kana Debian kana kugovera kunobva pavari, tinogona kuiisa nekuvhura terminal uye typing:
Kana izvi zvaitwa, isu tinongoda kutaipa googler ichiteverwa neyekutsvaga izwi. Googler zvakare ine sarudzo yemurumepeji rekubatsira iro rinotiratidza iwo ma parameter atinogona kushandisa nechishandiso ichi. Pakati pavo, "-n" inomira kunze, inozotiratidza chete mhinduro dzekutanga dzeGoogle, asi pane zvimwe zvakawanda.
Ini pachangu ndinofunga kuti Googler chishandiso chikuru, kunyanya yevashandisi vasingabvi pane iyo Linux terminal, asi pamusoro pazvo zvese zvinotidzidzisa kuti iyo Linux terminal chimwe chinhu chinopfuura chevatema skrini ine mavara Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Googler, chishandiso chekuve neGoogle pamutsetse wekuraira
zvinotyisa sei uye zvinonakidza
Zvakanaka kutumira. Asi zvinosuwisa ini ndinowana kana ndichiedza kuisa iyo PPA izvi:
"Iyi PPA haitsigire trusty"
Kutadza kuwedzera PPA: "Iyi PPA haitsigire trusty"
Ndine LM 17.3 Xfce x64. Unga ndibatsira here?
shamwari ndine kukahadzika netsaona vhura rairo yekuenzanisa mitsara miviri ndinoreva muchirungu tarisa uye tsvaga zvirevo zviviri izvi kutsvaga asi chimwe chakasiyana nechimwe, handizive kana iwe wawana zvandaida kutaura
Debian inogona kuve nekugadzirisa otomatiki mushanduro dzemberi